ल हेर्नुस नेपालमा टिक्न नसकेर मुम्बर्इ भासिएकि अर्चनाकाे यस्तो हर्कत? अब के गर्ला भारतले? हेर्न बाँकी छ – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > ल हेर्नुस नेपालमा टिक्न नसकेर मुम्बर्इ भासिएकि अर्चनाकाे यस्तो हर्कत? अब के गर्ला भारतले? हेर्न बाँकी छ
admin October 7, 2018 जीवनशैली	0
एजन्सी। केहि समय अगाडी सामाजिक संजाल मार्फत एकाएक नग्न फोटो र भिडियो सार्बजनिक गर्दै तहल्का पिटेकी अर्चना पनेरु अहिले भारतमा छिन । आफूलाई पोर्न स्टार भन्न रुचाउने अर्चना पनेरु अहिले भारतको मुम्बई बस्दै आएकी छन् । उनको उत्श्रीन्खल व्यवहार देखेर केहि फिल्म मेकरले त उनलाई नायिका नै बनाए तर त्यो फिल्म चल्न त के राम्रोसंग कोहि हेर्न सम्म गएनन् । त्यस लगत्तै युट्युबमा राखे पनि खास हेरिएन ।
यस्तै खाले नेपालमा विभिन्न किसिमका स्टन्ट गर्दै चर्चा बटुल्न नसकेपछि उनी भारत पलायन भएकी हुन् । भारत पलायन हुनु अगाडी काठमाडौँमा उनकी आमासंग विभिन्न डान्सबारमा काम गरेको खुलेको छ । काठमाडौँमा बस्दा पनि उनको खारव परिचयका कारण घरबेटीले कोठा नदिए पछी निक्कै सास्ती भएको थियो । यसरी चारै तिरबाट टिक्न नसके पछी उनि मुम्बई गएको बुझिन्छ ।
मुम्बईमा अहिले उनी आफूलाई पोर्न स्टारकै रूपमा स्थापित गराउने अभियानमा छिन् । तर, उनलाई कसैले भाउ दिएका छैनन् । अर्चना पनेरु पनि भारतीय झण्डा बोकेको तस्बिरसहित ट्विटरमा देखा परेकी छन् । उनले भारतको निकै प्रशंसा गरेकी छन् । भारतलाई ठूलो र विशाल देश बनाउन उनले आह्वान गरेकी छन् । हुन त उनि नेपाल मै रहे पनि उनको भारत मोह छर्लंग देखिन्थ्यो किन कि उनी हिन्दि बोल्ने गर्थिन ।
विवाहको केहि घण्टा पछि नै दुलहीले नदीमा हाम फालिन् ?
मानिसहरुको यस्तोसम्म पनि असिमित इच्छा हुन्छन् ।